Nhau - RFID tekinoroji inoshandiswa mune yechitima yekufambisa logistics indasitiri
RFID tekinoroji inoshandiswa mune yechitima yekufambisa zvinhu indasitiri
Iyo yechinyakare inotonhorera cheni zvigadzirwa uye yekuchengetera logistics monitors haina kunyatso kujeka, uye vanotakura uye vechitatu-bato logistics sevhisi vanopa vane yakaderera mutual trust. Ultra-yakaderera tembiricha chikafu chemufiriji, yekuchengetera zvinhu, nhanho dzekuendesa, uchishandisa RFID tembiricha emagetsi tag uye pallet system software yekuchengetedza kushanda kwakanaka kwekutonhora cheni zvigadzirwa kuti uve nechokwadi chekuchengetedzeka kwechikafu mune zvese zvitengeswa manejimendi manejimendi.
Wese munhu anoziva kuti njanji yekutakura inokodzera yekureba-yakakura uye yakakura-vhoriyamu yekutakura zvinhu, uye zvinobatsira kwazvo kutakura-kureba kutakura pamusoro pe1000km. Dunhu renyika yedu rakafara, uye kugadzirwa nekutengesa kwechikafu chakaomeswa chiri kure, izvo zvinoratidza chiyero chekunze chekubatsira njanji kutonhora kutakura zvinhu. Nekudaro, padanho rino, zvinoita sekunge huwandu hwekufambisa hwecheni yekufambisa cheni mumigwagwa yeChina njanji idiki, kuverengera isingasviki 1% yezvese zvinodikanwa zvekusimudzirwa kwechando cheni yekufambisa munharaunda, uye zvakanakira njanji mukutakura-kure-kurekufambisa hakuna kushandiswa zvizere.
Zvinhu zvinochengeterwa mufiriji yemugadziri mushure mekugadzirwa uye kuiswa mumapepa nemugadziri. Izvo zvinhu zvinobva zvarongedzwa pasi kana panhovo. Iyo yekugadzira kambani A inozivisa iyo yekutakura kambani yekuendesa uye inogona kukurumidza kuendesa kune yekutengesa kambani C. Kana bhizinesi A inoroja chikamu cheimba yekuchengetera mune yekuchengetera uye logistics bhizinesi B, uye izvo zvinhu zvinotumirwa kunzvimbo yekuchengetera uye logistics bhizinesi B, uye inofanirwa kupatsanurwa zvinoenderana neB kana zvichidikanwa.
Maitiro ese ekufambisa haana kunyatsojeka
Kuitira kudzora mutengo panguva yese yekutakura, yechitatu-bato yekuendesa bhizinesi ichave nemamiriro ekuti iyo firiji yuniti yadzimwa mukati meyese nzira yekufambisa, uye iyo firiji unit yakavhurwa kana yasvika pachiteshi. Izvo hazvigone kuvimbisa iyo yose inotonhora cheni zvinhu. Kana zvinhu zvikaendeswa, kunyangwe iyo yepamusoro yezvinhu iri kutonhora kwazvo, muchokwadi mhando yacho yatoderedzwa.
Maitiro akachengetedzwa haana kunyatsojeka
Nekuda kwekutarisirwa kwemitengo, mabhizinesi ekuchengetera zvinhu pamwe nekugadzirisa zvinhu anotanga kushandisa nguva yekugovera magetsi husiku kudzikisa tembiricha yedura kune yakaderera tembiricha. Midziyo yechando ichave yakamira masikati, uye tembiricha yedura rinotonhora ichachinja kupfuura 10 ° C kana yakatokwira. Pakarepo zvakakonzera kuderera pasherefu hupenyu hwechikafu. Iyo yechinyakare yekutarisisa nzira inowanzo shandisa tembiricha vhidhiyo rekodhi kunyatso kuyera uye kurekodha tembiricha yedzese mota kana kutonhora kuchengetedza. Iyi nzira inofanirwa kuve yakabatana netambo yeTV uye nemaoko inodzorwa kutumira iyo data, uye ruzivo rwe data rwuri mumaoko ekambani inotakura uye nekambani yekuchengetera zvinhu. Pane anotakura, mutumwa aisakwanisa kuverenga data racho. Nekuda kwekunetseka pamusoro pezvinetso zviri pamusoro izvi, mamwe makambani makuru uye epakati-kati ekugadzira mishonga kana makambani ezvekudya muChina panguva ino vangangoda kuisa mari yakawanda kwazvo mukuvaka matura echando uye ngarava dzekutakura, pane kusarudza masevhisi echitatu bato inotonhora cheni logistics makambani. Zviripachena, Iyo mutengo wemari yakadaro yekudyara wakakura zvakanyanya.
Kana iyo kambani inounza painotora zvinhu kukambani inogadzira A, kana zvisingaite kutakura nemapallet, mushandi anofanira kutakura zvinhu kubva pallet kuenda kumota inotakurirwa mufiriji; mushure mekunge zvinhu zvasvika kukambani yekuchengetera B kana kune yekambani yekutengesa C, mushandi anofanira kuendesa zvinhu kubva Mushure mekuburitswa kwetirori yefriji, yakarongedzwa panhovo ndokuzotariswa mudura. Izvi zvinowanzo kukonzera zvinhu zvechipiri kutakurwa zvakatwasuka pasi, izvo zvisingangotora nguva nekushanda, asi zvakare zvinokuvadza zvakapfava kurongedzwa kwezvinhu uye zvinokanganisa kunaka kwezvinhu.
Yakaderera kushanda kweimba yekuchengetera maneja
Paunenge uchipinda uye uchisiya imba yekuchengetera, mapepa-akavakirwa anobuda uye matura mareti anofanirwa kuunzwa, uye zvobva zvapinda nemaoko mukombuta. Iyo yekupinda inoshanda uye inononoka, uye iyo yekukanganisa mwero yakakwira.
Hunhu hwehutariri manejimendi marara
Mazhinji emasevhisi emawoko anodikanwa pakutakudza, kuburutsa uye kubata kwezvinhu uye kodhi disks. Kana imba yekuchengetera uye yekugadzirisa zvinhu B ichiroja imba yekuchengetera, zvinodikanwawo kumisikidza vashandi vekuchengetedza imba.
Gadzira yakangwara njanji tambo inotonhora cheni logistics nzvimbo, iyo inogona kugadzirisa izere seti masevhisi senge kutakura nhumbi, warehousing logistics, kuongorora, kuratidza kurongedza, uye kuendesa.
Kubva pane RFID technical pallet application. Tsvagiridzo yesainzi yakaunza tekinoroji iyi muindasitiri yezvigadzirwa zvinotonhora yagara ichiitwa. Sechinhu chekutanga manejimendi manejimendi manejimendi, mapallet anobatsira kuchengetedza rakaringana ruzivo rwekuchengetedzwa kwehuwandu hwakawanda hwezvinhu. Kuchengetedza iyo manejimendi manejimendi emapallet zvigadzirwa zvemagetsi inzira yakakosha yekuita yekugashira ketheni logistics system software nekukasira, zviri nyore uye nekukurumidza, nenzira chaidzo dzekutarisira uye zvine musoro kutarisira uye mashandiro. Izvo zvine kukosha kwakakosha kunatsiridza kwekutakura zvinhu zvekugadzirisa manejimendi kugona uye kudzikisa mutengo wekufambisa. Naizvozvo, tembiricha yeRFID yemagetsi inogona kuiswa patray. RFID magetsi emagetsi anoiswa patray, iyo inogona kushandira pamwe neyekuchengetera zvinhu zvine hungwaru manejimendi manejimendi kuverengera nekukurumidza kuverenga, kwakarurama uye kwakarurama Matagi akadaro emagetsi akashongedzerwa nemaantena asina waya, akabatanidzwa IC uye tembiricha zvinodzora, uye mutete, anogona Bhatiri bhatani, iro rave richishandiswa zvinopfuura kweanopfuura makore matatu, rine zviratidzo zvemadhijitari zvakakura uye zvemukati zvemashoko ekupisa, saka zvinogona kunyatsofunga izvo zvinopihwa zvinotonhora cheni logistics tembiricha yekutarisa.
Pfungwa yepamoyo yekutenga mapallet yakafanana. Iwo mapallet ane tembiricha yemagetsi mateki anozounzwa kana kubhadharirwa kune vanobatirana vagadziri mahara, kuti vagadziri vanyore munzvimbo inotonhorera yezvigadzirwa nzvimbo yechitima njanji, kuchengetedza pasa basa kuunzwa nguva dzese, uye kukurumidza mapallet mune maindasitiri ekugadzira, mabhizimusi ekuendesa, chando cheni Iko kushandiswa kwepakati pekutenderera masisitimu munzvimbo dzekutengesa uye mabhizinesi ekutengesa kusimudzira nhovo yekutakura uye basa rehunyanzvi rinogona kuvandudza mashandiro ekutakura zvinhu, kudzikisira nguva yekuendesa, uye zvakanyanya kudzikisa mutengo wekufambisa.
Chitima chasvika pachiteshi chekuuya, midziyo ine firiji inotakurirwa kuendeswa kurodha nekuburitsa papuratifomu yekuchengetera bhizinesi B, uye kuongorora kwekuputsa kunoitwa. Magetsi forklift inobvisa zvinhu nemapallets uye anozviisa pane inotakura. Kune musuwo wekutarisa wakagadzirwa kumberi kweanotakura, uye nharembozha yekuverenga software yakaiswa pamusuwo. Mushure mekumakwa kweRFID emagetsi pabhokisi rekutakura uye nhovo dzapinda mukati mekuvharika kwesoftware yekuverenga, iine ruzivo rwezvinhu zvezvinhu zvakatakurwa nevebhizinesi A mune ic yakasanganiswa uye neruzivo rwezvakanyorwa munhovo. Iyo nguva iyo pallet inopfuura iyo yekuongorora musuwo, inoverengwa neiyo software Yakawanikwa uye yoendeswa kune komputa software. Kana mushandi akatarisa chiratidziro, anogona kubata dzakateedzana ruzivo rwe data senge huwandu hwese uye mhando yezvinhu, uye hapana chikonzero chekutarisa mashandiro chaiwo. Kana zvirimo zveruzivo rwekutakura zvinhu zvinoratidzwa pachiratidziro chinoenderana nechavatumwa chakapihwa ne Enterprise A, zvichiratidza kuti zviyero zvasangana, mushandi anodzvanya bhatani OK padyo neanotakura, uye izvo zvinhu nemapelleti zvichachengetwa mudura zvinoenderana nekutakura uye otomatiki tekinoroji stacker Iyo yekuchengetera nzvimbo yakapihwa ne logistics zvine hungwaru manejimendi system
Kuunzwa kwemarori. Mushure mekugamuchira iyo odha ruzivo kubva kukambani C, kambani A inozivisa kambani B yekutakura kwetiraki. Zvinoenderana neakaraira ruzivo rwakasundidzirwa nekambani A, kambani B inogovera iyo yekuendesa dhizaini yezvinhu, inovandudza iyo RFID ruzivo zvemukati zvemapallet nhumbi, izvo zvinhu zvakarongedzwa neiyo yekuendesa dhirivhari inoiswa mumapallets matsva, uye izvo zvitsva zvinhu zvemashoko zvemukati inosanganiswa neRFID emagetsi emagetsi uye anoiswa mune yekuchengetera Masherufu, kumirira kugadzirwa kwekutumira kuendesa. Izvo zvinhu zvinotumirwa kune zvebhizinesi C nemapallets. Iyo bhizinesi C inotakura uye kuburutsa zvinhu mushure mekugamuchirwa kweinjiniya. Iwo mapallet anounzwa nebhizinesi B.
Vatengi vanozvisimudza. Mushure mekunge mota yemutengi yasvika pane bhizinesi B, mutyairi uye nyanzvi yechando yekuchengetedza inotarisa zvirimo mune iyo yekutora ruzivo, uye otomatiki michina yekuchengetera michina inotakura zvinhu kubva kuchitonho chando kuenda kurodha nekuburitsa chiteshi. Zvekufambisa, pallet haicharatidzwe.